१२ घण्टामा ९०० पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर बिश्व रेकर्ड, त्यसपछि जे भयो परिन्छ चकित ! – List Khabar
Home / रोचक / १२ घण्टामा ९०० पुरुषसँग सम्बन्ध राखेर बिश्व रेकर्ड, त्यसपछि जे भयो परिन्छ चकित !
admin January 2, 2022 रोचक Leaveacomment 297 Views
एडल्ट स्टार लिसा स्पार्क्सले सबैभन्दा धेरै पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी छिन् । तर अहिले उनले यो पूरै घटनाबारे आफ्नो अनुभव सेयर गरेका छन् ।
सन् २००४ मा आयोजित एक कार्यक्रममा १२ घण्टामा ९०० पुरुषसँग सम्बन्ध बनाएर लिसाले विश्वलाई नै चकित पारिन् ।उनको नाम गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा समेत लेखिएको छ ।
लिसाले कार्यक्रममा सबै पुरुष आफ्नो पालोको पर्खाइमा रहेको र उनीहरु अन्य दुई महिलासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको बताइन् । घटनाको अन्त्यमा, लिसाले आफ्नो निकटतम प्रतिद्वन्द्वीलाई हराएपछि थप २१ पुरुषहरूसँग सम्बन्ध राखे। यसअघि सन् २००३ मा सोही कार्यक्रममा अर्की एक महिलाले ७५९ पुरुषसँग यस्तो गरेर कीर्तिमान बनाएकी थिइन् ।
उनले घटनालाई प्रहरीले कडा निगरानीमा राखेको र कार्यक्रम हुनुअघि नै यसमा संलग्नलाई प क्राउ गर्ने चे तावनी दिइएको बताए । यही कारण थियो कि यो सम्पूर्ण कार्यक्रम गो प्य गोदाममा आयोजित गरिएको थियो। लिसाले यस समयमा आफूलाई धेरै बोर भएको र अर्डर गर्नुपरेको बताइन् ।
आफ्नो अनुभव बताउँदै लिसाले घटनापछि तुरुन्तै जेलजस्तो ठाउँबाट बाहिर निस्केर आफ्नो घर जान मन लागेको बताइन् । यो घटना पछि मेरो पेज पनि विकिपिडियाबाट हटाइयो, जसको कारण आज सम्म बुझ्न सकेको छैन।
Previous अनिश्चितकालका लागी अब यी ९ देशबाट नेपाल आउन नपाउने
Next के कारणले भएको थियो काठमाडौंकै कलेजमा ग्याङ फा’इट ? कारण सुन्दा प्रिन्सिपल छक्क !